ခင်ပွန်းဖြစ်သူThe Voice Myanmar Season (3) ပြိုင်ပွဲဝင် ကိုလင်းမြိုင်ရဲ့ သီဆိုမှုအပေါ် မျက်ရည်တောင်ကျခဲ့ ရတယ်ဆိုတဲ့ နေနေ – Cele Posts
အဆိုတော် နေနေ ကတော့ ပရိသတ်တွေခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင် တဲ့ သီချင်းကောင်း လေးတွေကို သီဆိုလေ့ရှိသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နေနေက လက်ရှိ မှာလည်း သူမဝါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေသလို သူမရဲ့ မိသားစုလေး ကိုလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ကြင်နာစွာ စောင့်ရှောက် နေတဲ့ မိခင်ကောင်း တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေနေရဲ့ အမျိုးသား ကိုလင်းမြိုင် ကလည်း ဂီတကိုဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ The Voice Myanmar Season (3) သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မနေ့က Knockout Round မှာတော့ နေနေရဲ့အမျိုးသား ကိုလင်းမြိုင် က ကံမကောင်းစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ နေနေကတော့ ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားတဲ့ ခင်ပွန်းအတွက် “ချစ် ယောက်ကျားရေ…အရင်ဆုံး သီချင်းလေးကို mood အပြည့်နဲ့ ဆိုပြပေးသွားတာ ကြွေဆင်းနေပါပြီနော်။ ko kyar pauk Team ကလည်း လုံးဝ ရှယ်တွေကြီး စုနေတာကို တွေ့ရတော့ တကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ​​စ​ဖြစ်ဖြစ် ယောက်ကျား အကောင်းဆုံး ဆိုသွားတာကို ကြားလိုက်ရလို့ မျက်ရည်တောင်ကျ ချင်တယ်။ ချစ်တယ်နော် babe. .you r my winner 😇❤❤❤”
“The Voice ဆိုတဲ့ ပြိုင်ပွဲ ခေါင်းစဉ် ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ထားခြားတဲ့ အသံ ပိုင်ရှင် ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ အတွက် ကိုယ်ကတော့ သူ ပြိုင်ခဲ့တာ အဲဒီအတွက် ပဲလို့ မြင်မိတဲ့ အချိန်ကစပြီး သူ့အသံကို ကြားဘူးတဲ့ သူတိုင်း လည်း အဲလိုပဲ ခံစားကြ ရမယ်လို့ လက်ခံထားတယ်။ အဲဒီအတွက် ရလဒ် က ဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ် သူက ကိုယ့်အတွက် တော့ အဆိုတော် တစ်ယာက်လို့ ခံယူထားတယ်။ so keep up the good work babe.. ☺” ဆိုပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုလင်းမြိုင်အတွက် အားပေးစကားပြောလာပါတယ်။
နေနေကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုး ကိုမဆို အကောင်းဆုံးလက်ခံပြီး ခင်ပွန်းသည် အတွက်တော့ အားဖြစ်စေမယ့် အားဆေးကောင်း တစ်ခွက်ပါပဲနော်။ ကိုလင်းမြိုင်လည်း ဝါသနာ ပါတဲ့ ဂီတလမ်းကြောင်းမှာ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
ခငျပှနျးဖွဈသူThe Voice Myanmar Season (3) ပွိုငျပှဲဝငျ ကိုလငျးမွိုငျရဲ့ သီဆိုမှုအပျေါ မကျြရညျတောငျကခြဲ့ ရတယျဆိုတဲ့ နနေေ
အဆိုတျော နနေေ ကတော့ ပရိသတျတှခေံစားခကျြနဲ့ တိုကျဆိုငျ တဲ့ သီခငျြးကောငျး လေးတှကေို သီဆိုလရှေိ့သူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ နနေကေ လကျရှိ မှာလညျး သူမဝါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျနသေလို သူမရဲ့ မိသားစုလေး ကိုလညျး ဂရုတစိုကျနဲ့ ကွငျနာစှာ စောငျ့ရှောကျ နတေဲ့ မိခငျကောငျး တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ နနေရေဲ့ အမြိုးသား ကိုလငျးမွိုငျ ကလညျး ဂီတကိုဝါသနာပါသူ တဈယောကျဖွဈပွီး လကျရှိ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ The Voice Myanmar Season (3) သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ နတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မနကေ့ Knockout Round မှာတော့ နနေရေဲ့အမြိုးသား ကိုလငျးမွိုငျ က ကံမကောငျးစှာနဲ့ နှုတျဆကျထှကျခှာ လာရပွီဖွဈပါတယျ။ နနေကေတော့ ပွိုငျပှဲကနေ နှုတျဆကျ ထှကျခှာသှားတဲ့ ခငျပှနျးအတှကျ “ခဈြ ယောကျကြားရေ…အရငျဆုံး သီခငျြးလေးကို mood အပွညျ့နဲ့ ဆိုပွပေးသှားတာ ကွှဆေငျးနပေါပွီနျော။ ko kyar pauk Team ကလညျး လုံးဝ ရှယျတှကွေီး စုနတောကို တှရေ့တော့ တကယျကိုလေးစားမိပါတယျ။ ဘယျလိုပဲ​​စ​ဖွဈဖွဈ ယောကျကြား အကောငျးဆုံး ဆိုသှားတာကို ကွားလိုကျရလို့ မကျြရညျတောငျကြ ခငျြတယျ။ ခဈြတယျနျော babe. .you r my winner 😇❤❤❤”
“The Voice ဆိုတဲ့ ပွိုငျပှဲ ခေါငျးစဉျ ရဲ့ အဓိပ်ပာယျက ထားခွားတဲ့ အသံ ပိုငျရှငျ ကို ရညျညှနျးတဲ့ အတှကျ ကိုယျကတော့ သူ ပွိုငျခဲ့တာ အဲဒီအတှကျ ပဲလို့ မွငျမိတဲ့ အခြိနျကစပွီး သူ့အသံကို ကွားဘူးတဲ့ သူတိုငျး လညျး အဲလိုပဲ ခံစားကွ ရမယျလို့ လကျခံထားတယျ။ အဲဒီအတှကျ ရလဒျ က ဘယျလို ဖွဈဖွဈ သူက ကိုယျ့အတှကျ တော့ အဆိုတျော တဈယာကျလို့ ခံယူထားတယျ။ so keep up the good work babe.. ☺” ဆိုပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုလငျးမွိုငျအတှကျ အားပေးစကားပွောလာပါတယျ။
နနေကေတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ ဘယျလိုရလဒျမြိုး ကိုမဆို အကောငျးဆုံးလကျခံပွီး ခငျပှနျးသညျ အတှကျတော့ အားဖွဈစမေယျ့ အားဆေးကောငျး တဈခှကျပါပဲနျော။ ကိုလငျးမွိုငျလညျး ဝါသနာ ပါတဲ့ ဂီတလမျးကွောငျးမှာ ဆကျလကျ လြှောကျလှမျးနိုငျဖို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွ ပါစလေို့ဆုတောငျး ပေးလိုကျပါတယျ။